(၆၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနားအောင်မြင်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပနိုင်ရေး စည်းဝေး Post date: Sat, 12/20/2014 - 07:16 ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပမည့် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား အောင်မြင်ခမ်းနားစွာကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် ဖိတ်ကြားရေး၊ ကြိုဆိုနေရာချထားရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန လောကနတ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်ကြူက အမှာစကားပြောကြားရာတွင် မိမိတို့ အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ဗိုလ်ရှုခံ
Read more တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့် Post date: Fri, 12/19/2014 - 21:16 တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြု ညစာစားပွဲ အခမ်း အနားကို ယနေ့ ညန (၆) နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခန်းမဆောင်ကြီး၏ စုဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်ချီးမြှင့်သည်။
Read more တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သရေစည်သူမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက် Post date: Fri, 12/19/2014 - 20:27 တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် တပ်မတော် (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) အတွက် လိုအပ်သော လက်ရုံးရည်၊ နှလုံးရည် ပြည့်ဝသည့် ဆေးသိပ္ပံပညာရှင်အရာရှိများ မွေးထုတ်ပေးရန်ဆိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးဝန်ထမ်း တပ်ဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ရဲဘော်တို့သည် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည့် တပ်မတော်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင် ကာကွယ်ပြုစုကုသ ပေးရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု ခက်ခဲပြီး ဆေးအကာအကွယ်ပေးရန် လိုအပ်နေသည့် ဒေသများမှ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများကိုလည်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆရာဝန် များ၏ ကျင့်ဝတ်များနှင့်အညီ စေတနာ၊ အကြင်နာ၊ ဂရုဏာ၊ ကိုယ်ချင်းစာမှုများ ထားရှိဆောင်ရွက်ပေး သွားကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Medical Ethics ဟု ခေါ်သည့် ဆေးပညာ ကျင့်ဝတ်၊ Research Ethics ဟုခေါ်သည့်
Read more နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ Post date: Fri, 12/19/2014 - 19:49 ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ပရာယွတ်ချန်အိုချာ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ (၅) ကြိမ်မြောက် ဂျီအမ်အက်စ် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးနှင့် ဂျီအမ်အက်စ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ရန် အတွက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ယနေ့ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းအထူးလေယာဉ်ဖြင့်
Read more နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျီအမ်အက်စ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ Post date: Fri, 12/19/2014 - 19:27 နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့၌ ကျင်းပမည့် (၅) ကြိမ်မြောက် ဂျီအမ်အက်စ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အတွက် ယနေ့မွန်းတည့် (၁၂) နာရီတွင် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ထွက်ခွာသွားသည်။
Read more ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှု ဖြေလျှော့စေရန်အတွက် တည်ဆောက်မည့် အင်းစိန်မီးရထား ခုံးကျော်တံတား ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာနှင့် တွင်းတော်ဝန်းအခမ်းအနားများ ကျင်းပ Post date: Fri, 12/19/2014 - 18:15 ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ အင်းစိန်မီးရထား ခုံးကျော်တံတားအသစ်တည်ဆောက်ရန် ပန္နက်တော်တင် မင်္ဂလာနှင့် တွင်းတော်ဝန်း မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် ပြုလုပ်ရာ ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသန်းဌေး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န်ကြီးဦးမြင့်သိန်း၊ တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးများဖြစ်ကြသော ဦးအောင်ခင်၊ ဦးကျော်စိုး၊ မြန်မာ့ မီးရထားမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်
Read more လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်၊ ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံ သုတေသန စမ်းသပ်စိုက်ခင်းအတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ ရောက်ရှိမှု ကွင်းဆင်းကြည့်‌ရှု စစ်ဆေး Post date: Fri, 12/19/2014 - 17:47 လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်သည် ယနေ့နံနက် (၇) နာရီခွဲ အချိန်တွင် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ စက်စက်ယို ဆည်ရေသောက်စနစ်၊ တောင်သူပညာပေး တဆက်တစပ် တည်း ဧက (၉၀၀) စိုက်ကွင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ကိုရီးယားနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာနတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော Soil Complex Micro-Organisim Test Field သုတေသနစိုက်ခင်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ ရောက်ရှိလာမှုကို ကိုရီးယား ပညာရှင် Dr. Hyun Seok Lee ဦးဆောင်သော
(၆၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနားအောင်မြင်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပနိုင်ရေး စည်းဝေး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ချီးမြှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သရေစည်သူမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျီအမ်အက်စ်ထိပ်သီး အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထွက်ခွာ ကြေညာချက်
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် သက်တမ်းတိုး ဆောင်ရွက်ရန် အသိပေး ကြေညာချက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ခန့်အပ်တာဝန်ပေး more ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား
သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဗဟုသုတအဖြာဖြာ (၂၀၁၄)
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကလေး၊ ကလေးဝ၊ မင်းကင်း၊ မော်လိုက်၊ ဖောင်းပြင်တို့မှ မြို့မိမြို့ဖများအား တွေ့ဆုံ Post date: 12/18/2014 - 20:37 Read more MOI News
(၆၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနားအောင်မြင်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပနိုင်ရေး စည်းဝေး ... တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၆) သင်တန်းဆ ... တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သရေစည်သူမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော်ဆေးတက္ကသိုလ် ဗိုလ်လောင်း သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၆) ...
စိန်ခေါ်မှုများကို အမျိုးသားရေးအင်အားစုအားလုံးနှင့် လက်တွဲပြီး အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချထား ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိအခြေ အနေများကို မိဘပြည်သူများထံ ရေဒီယိုမှ တစ်ဆင့် အသိပေးပြောကြား နေကြဖြစ်တဲ့ အတိုင်း နိုဝင်ဘာလ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များကို ပြောကြား ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Read more More ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း (၆) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား- လာအို- မြန်မာ- ဗီယက်နမ် (CLMV) ထိပ်သီး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းသည် မတ် (၁၂)ရက် ညနေ(၄)နာရီတွင် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယင်ကျန်းမြို့ ဒုန်ချမ်း ပဲလေ့စ်ဟိုတယ် Grand Ballrom ၌ ကျင်းပသည့် (၆) ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဒီးယား- လာအို- မြန်မာ- ဗီယက်နမ်(CLMV) ထိပ်သီး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေး
Read more (၂၇) ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ အကြို မြင်းစီးအားကစား ပြိုင်ပွဲဖွင့်ဖွဲ့ အခမ်းအနားသို့ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း တက်ရောက် အားပေး ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းသည် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ ဒုတိယ ဝန်ကြီးချူပ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေး၊ ပြည်ပ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဥရောပရေးရာ ဝန်ကြီး H.E Mr. Didier Reynders ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်၊ သံတမန်ဆောင် ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
Read more ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် ဒုတိယဝန်ကြီးများ၏ မိန့်ခွန်းများ
ကမ္ဘာ့ စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့ (၃-၅-၂၀၁၄) အခမ်း အနား၌ ပြောကြားသည့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၏ အဖွင့်အမှာစကား ကြွရောက်လာကြသောဂုဏ်သရေရှိဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား….
ကျွန်တော့်အနေဖြင့်အားလုံးကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါကြောင်း
ရှေးဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်။ ကျွန်တော့်အား ယခုကဲ့သို့ ယူနက်စကိုမှကျင်းပသော ကမ္ဘာ့စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားခဲ့သည့်အတွက် လွန်စွာ ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်ပါကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြား လိုပါတယ်။
Read more More ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးပိုက်ထွေး ဂျပန်- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး အသင်းမှ Mr.TSUZUKI Osamu အားလက်ခံတွေ့ဆုံ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးသည် ယနေ့ နေ့လည် ၂ နာရီ ၃၀ အချိန်တွင် ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှ Mr.TSUZUKI Osamu အား ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။
Read more ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အကြံပေး ကွန်ဖရင့်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ (CPPCC) အဖွဲ့ဝင်နှင့် သံအမတ်ကြီးဟောင်း ဖြစ်သူ HE. Mr. Zhaung Jiuhuan နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်သည် ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ အချိန်တွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အကြံပေး ကွန်ဖရင့်၏ နိုင်ငံခြားရေးရာ ကော်မတီ (CPPCC) အဖွဲ့ဝင်နှင့် သံအမတ်ကြီးဟောင်းဖြစ်သူ HE. Mr. Zhaung Jiuhuan နှင့် အဖွဲ့ဝင် (၃)ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံး ဧည့်ခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံ ခဲ့သည်။
Read more MRTV Live
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပညာတော်သင်ဆု အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (Aptis Test) ဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်နှင့် စာစစ်ဌာန စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပညာတော်သင်ဆု အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (Aptis Test) ဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်နှင့် စာစစ်ဌာန စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပညာတော်သင်ဆု အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (Aptis Test) ဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်နှင့် စာစစ်ဌာန စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပညာတော်သင်ဆု အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (Aptis Test) ဖြေဆိုရန် ခုံအမှတ်နှင့် စာစစ်ဌာန စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
ဒို့ကျေးရွာ အတွဲ (၁၁)၊ အမှတ် (၂၄)
ပြန်ကြားပေးရန်၊ ဖျော်ဖြေပေးရန်၊ ပညာပေးရန်